I-SEO ifumana i-rap embi ... kodwa ayisiyiyo le! | Martech Zone
Cofa uze ufumane oku kulandelayo yokuzonwabisa:
Mhlawumbi elona candelo lilungileyo lale vidiyo kukuba iingcebiso ziyamnandi- zombini zichaziwe kwaye zichanekile!
Ndifumene iividiyo ezimbalwa ngakumbi kuMsebenzi wekhontrakthi, kwaye zikhona ezingakumbi iividiyo kwisiteshi sika-Chuck se-Youtube. Kananjalo, jonga Ibhlog kaChuck!
tags: ukubandakanyeka kwabathengiiposi ohyeimephu engqondweniiinkawu zenkawuimyonoukuthengisa
Epreli 12, 2008 ngo-5: 34 AM
oh thixo othandekayo
Epreli 12, 2008 ngo-10: 18 AM
Ewe, ekugqibeleni umsebenzi wam njengengoma ye-rap.
Ndiyayithanda inyani kukho umfazi ongacwangciswanga kwigunjana elisemva kwakhe ekugqibeleni.
Epreli 13, 2008 ngo-10: 42 PM
Ndiyicinga ukuba le vidiyo ye-rap ine "cubicle gals" endaweni yeentsana eziphangiweyo.
Epreli 12, 2008 ngo-11: 14 AM
Yithande le vidiyo, into elungileyo kukuba le nto uyithethayo ichanekile. Akukho nto igwenxa ekwenzeni ukufunda kube mnandi, qhubeka wenze le uyenzayo, ndiyazingca ngawe mntakwethu omncinci